Amabinzana othando kude, Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Ubudlelwane bemigama emide kunokuba yinto enzima ngokwenene, kuba xa umthanda umntu, into oyifunayo kukuba kunye nabo kwaye umbone ngalo lonke ixesha, ukuze ukwazi ukumanga nokubanga ngokuqhubekayo, kwaye ukuba ukude kakhulu kuloo mntu ukhethekileyo ezi zinto zilula ziba ayinakwenzeka.
Nangona kunjalo, ubudlelwane bemigama emide bunokusebenza ukuba kukho ukuzibophelela kwindawo yabo bobabini abantu, kwaye ukuba ngaphezulu kwako konke kukho uthando nokuthembana. Ithemba yinto ekufuneka yakhiwe ngokuhamba kwexesha, kodwa ukubonisa uthando lwakho kukho izinto ezimbalwa onokuzenza.
1 Amagama othando kude
2 Imiyalezo yokuthanda umgama
3 Amabinzana malunga nothando kude
4 Amazwe othando kude
5 Iividiyo zamabinzana abathandi abakude
Ndiyayithiya yonke i-intshi eyahlulahlula kuwe, nangona ndiyazi ukuba singaphatha yonke into kwaye kufuneka uyazi ukuba xa ubuya, ndiza kube ndikulindile.
Naphi na apho ukhoyo ndiya kuhlala ndifuna ukuba secaleni kwam, kodwa ayinamsebenzi kuba kufuneka sithembele kwaye sazi ukuba siza kuphinda sibe kunye.
Sukubamamela abantu abathi ubudlelwane obukude abusebenzi, ndiyazi ukuba singaphatha yonke into kwaye siyakwenza kakuhle.
Umgama usenokuthetha ukuba asinakulala ndawonye, ​​kodwa into engenakukunceda kukuba ndiphupha ngawe ubusuku ngabunye endibusebenzisayo ngaphandle kwakho.
Andikhathali ukuba asinakuba kunye kwaye kukho umgama omde phakathi kwethu kuba umvuzo ufanelekile, ukuba kunye nawe bonke ubomi bethu.
Ndifuna yonke into kuwe, kodwa apha kufutshane nam.
Ndiza kulinda oko kuthatha, kodwa ndikudinga apha ecaleni kwam kuba usisiqingatha sam.
Ayinamsebenzi nokuba uphi ngoba nokuba ungahamba umgama omde kangakanani, yonke imihla edlulayo ndiziva ndikhulule ngaphakathi entliziyweni yam.
Ndihleli ndisiva ukuba umgama uyalibala, kodwa andivumi kuba nokuba ungahamba kangakanani, ndihlala ndikugcina engqondweni yonke imizuzwana edlulayo.
Ubomi ngaphandle kwakho ayibubo ubomi, kodwa ndiyakuthembisa ukuba ndizokulinda okoko kuthatha.
Nangona umgama kunye neekhilomitha zisasahlula, uthando lwethu luhlala lusibuyisela kunye.
Ungaze ube nexhala ngomgama kuba ndiya kuhlala ndifuna ukuba nawe, ndikumange, ndikwanga kwaye ndikuhlebele endlebeni indlela endikuthanda ngayo.
Uthando lwam kuwe lwahlukile, lukhethekile kwaye alunasiphelo, andikhathali nokuba siphi, alunakuze lutshintshe.
Imiyalezo yokuthanda umgama
Ikhaya lam yindawo apho ukhoyo, ke ukuba kufuneka ndihambe amakhulukhulu eekhilomitha ukuba ndibe nawe, ungathandabuzi nakanye umzuzwana ukuba ndiya kuthanda.
Ubudlelwane obude obude bunokwenzelwa uthando olomeleleyo, kodwa eyethu yenye yezo, ke akukho nto unokukhathazeka ngayo.
Inye into endinokuyifumana kukuba awukho ecaleni kwam xa ndivuka kusasa, kodwa yinto enokulungiswa.
Ndiza kuhlala ndilwa kuba singahamba sihlala kunye, andikhathali nokuba ukude kangakanani.
Ukuba ngoku sithandana kakhulu kude, cinga indlela esiya kuthandana ngayo xa sibonana yonke imihla.
Usuku esinokubonana ngalo naliphi na ixesha esifuna ngalo, ngokungathandabuzekiyo ndiya kuba ngoyena mntu wonwabileyo kubo bonke el mundo.
Yeka ukucinga kwangoko malunga nomgama owesahlulayo kwaye ucinge ngothando olusimanya kakhulu.
Cinga nje ukuba wonke lo mgama ekufuneka sijongane nawo namhlanje luvavanyo lwamandla othando lwethu, ukuba siyakwazi ukuwoyisa siya kuba kunye kwaye sonwabe bonke ubomi bethu.
Ndinovuyo ngalo lonke eli xesha silichitha sodwa, kuba enkosi ngaloo nto ndiye ndazibona izinto ezintle endiziva zingenxa yenu.
Musa ukoyika umendo ekufuneka siwuhambile, cinga ngcono ngekamva, indawo ekuya kuthi sobabini sibe kunye ubomi bethu bonke.
Amabinzana malunga nothando kude
Ngamanye amaxesha umgama yeyona nto inokwenzeka kwisibini, iya kusenza somelele kwaye sikhuseleke kubudlelwane babo.
Yonke imihla ndivuka ngoncumo kuba kukho usuku olunye oluncinci lokuba ekugqibeleni ubuye kwaye sikunye.
Ngenye imini ndiya konwaba kuba endaweni yokuvuka ndikhangele kwifowuni yam, ndiza kuba nakho ukujonga kulaa mahle anawo.
Uqaphele? Namhlanje ndichithe imini yonke ndikuthumelela uthando kunye nokuwolana ukude.
Andikhathali nokuba ukude kuba ndiyazi ukuba xa sijonga ngefestile ebusuku, sobabini sijonge iinkwenkwezi ezifanayo ezinenyanga enye. Ihlala indenza ndizive ndisondele kakhulu kuwe.
Cinga ukuba umgama omkhulu, kokukhona siya konwaba xa sidibana kwakhona. Ngalo mzuzu siza kubona ukuba yonke into inendima yayo entle kuba siya kuba manyene ngakumbi kunangexesha lokuhamba kwakho.
Nangona singekhe sibonane, ndiyakuthembisa ukuba yonke imihla ndiza kukuthumela ibinzana endikuxelela ngalo ukuba ndisakuthanda ngokufana nomhla wokuqala. Ndiza kuqala ngale ... Ndiyakuthanda ubomi bam.
Kuqhelekile ukuba kubuhlungu xa sahlukene, kuba uluthando lobomi bam kwaye siziqingatha ezibini zento enye. Xa isibini sidityaniswe, umgama uhlala uyinto ebangela iintlungu.
Amazwe othando kude
Ngamanye amaxesha umgama uyindlela elungileyo yokuqonda oko ubunako ecaleni kwakho.
Kubuhlungu ukungakwazi ukuvuka ecaleni kwakho.
Ndijonge phambili ngomso, ke kuyakubakho usuku olunye ukukubona kwakhona.
Ndifuna ukukhumbuza ukuba uthetha ukuthini kum, ndikuthanda kancinci yonke imihla.
Ndingathanda ukuba umgama unyamalale ngonaphakade.
Ndiziva ndinethamsanqa ngokuba nawe ebomini bam, nangona sikude.
Ndiyazi ukuba ikamva lethu lifune ukuba sibe kunye, ke andikhathali malunga nomgama, bubungqina obunye bobunye bothando lwethu olukhulu.
Andinakukwazi ukukuncamisa, kodwa ngowuphi umgama ongenakuthabatha kum kukuba ndicinga ngawe ngalo lonke ixesha.
Yonke imihla edlulayo ndiyakuthanda kancinci.
Ndiza kunyamezela nantoni na eyimfuneko kuba umvuzo ufanele yonke into.
Ndinentabalala yomhlaba, ekuphela kwento endifuna ukuyonwaba kukuba nawe ebomini bam, nokuba ikude.
Iividiyo zamabinzana abathandi abakude